Dalka Qadar oo maanta ay ka qabsoontay doorasho baarlamaani ah : Calanka.com
Dalka Qadar oo maanta ay ka qabsoontay doorasho baarlamaani ah
Dadka reer Qatar ayaa Sabtida maanta ah ka qeybgalay codeyntii u horreysay ee baarlamaani ah ee dalkani uu qabto, taasi oo muujineysa astaan dimuqraadiyadeed laakin ay falanqeeyeyaashu sheegayaan in aysan horseedi doonin in ay talada ka wareejiso qoyska boqortooyada ee dalkaasi ka taliya, sidaasina waxaa warisay AFP.
Waxaa loo codeynayaa 30 xubnood oo ka mid noqonaya 45-ka xubnood ee Golaha Shuurada, kaasi oo ah gole leh awoodo xadidan uuna horey u soo magacaabi jiray amiirka dalkaasi.
Ilaa 101 musharrax oo ka badan saddex meelood meel musharaxxiinta ayaa tartanka isaga haray ama ka tanaasulay ka hor galabnimadii maanta, sida laga soo xigtay TV-ga ay dowladdu maamusho ee Qatar TV, waxayna tallaabadaasi u muuqataa mid ay ku taageerayaan musharraxiinta kale ee deegaan doorashadooda.
183 musharrax ayaa ku haray tartanka loogu jiro 30-ka kursi ee Golaha Shuurada, iyadoo 15-ka kursi ee dhimman uu soo magacaabi doono Amiirka dalkaasi.
Falanqeeyeyaasha ayaa sheegaya in go’aanka ah in doorasho la qabto uu dalbanayay dastuurkii 2004-tii laakiin marar badan dib loogu dhigay wax loogu yeeray “danaha qaranka”, iyadoo ay doorashadani imanayso xilli ammaanka si weyn loo adkeeyay oo ay Qatar ay isku diyaarineyso martigelinta Koobka Adduunka ee 2022-ka.
“Waa hab ay ku muujinayaan in ay u dhaqaaqeen jihada saxda ah, iyo in ay doonayaan in ay gaaraan ka qaybgal siyaasadeed oo badan,” ka hor ciyaaraha Koobka Adduunka“, ayay tiri Luciano Zaccara, oo bare ka ah Jaamacadda Qatar.
Golaha Shura ayaa loo oggolaan doonaa in uu soo jeediyo sharciyada, ansixiyo miisaaniyadda iyo inuu wasiirada u yeeri karo. Laakiin amiirka, oo ah kan ugu awoodda badan ee dalkan ayaa leh ama adeegsan kara awoodda diidmada ee loo yaqaan veto.